Nke a bụ ndepụta nke smartwatches nke ga-enweta gam akporo Wear 2.0 na 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Naanị ụnyaahụ Google kwadoro ihe ọtụtụ n'ime anyị na-atụ egwu, nke ahụ bụ na ọ na-akwadebe mwepụta ahụ, maka nkeji mbụ nke 2017, nke smartwatches ọhụrụ abụọ ga-ebu stampụ nke ha. Nakwa mgbe ọkwa a dị ịtụnanya ọ kwadoro nke ahụ 2.0 Weebụ Weebụ Ọ ga-adị na elekere smart abụọ a na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ na ahịa.
Ndepụta nke nlele nke a ga-emelite na ụdị ọhụrụ nke gam akporo Wear adịghị ogologo, ma enwere ụfọdụ ọpụpụ pụtara ìhè, ma ugbu a ọ bụ nke Google nyere. Na ozi ọma anyị nwere ike ịchọta na gam akporo Wear 2.0 a ka nwere ọtụtụ akụkọ, yabụ ikekwe ọ ka mma ichere maka ụbọchị ntọhapụ ka a mara ya na onye ọchụchọ na-enye anyị ihe ngosi.
N'oge na ịmalite imeghe ọnụ gị na nke a bụ ndepụta smartwatches nke a ga-emelite na gam akporo Wear 2.0:
N'ime ndepụta a, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ n'ime smartwatches dị ugbu a, mana ọ naghị anabata ngwaọrụ ndị ọzọ ebuputere na 2014 dịka Moto 360, LG G Watch ma ọ bụ Azus Zen Watch, nke ga-agbaso, anyị chere, na naanị ụfọdụ n'ime ihe ọhụrụ na gam akporo Wear 2.0.
Ndi smartwatch gị dị na ndepụta nke ndị nwere ihu ọma iji nweta ụdị ọhụụ nke gam akporo Wear?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nke a bụ ndepụta nke smartwatches nke ga-enweta gam akporo Wear 2.0 na 2017